မြန်မာ့ဆန် ပြည်ပဈေးကွက် ပျောက်ဆုံးတော့မှာလား
Post byစိုးချစ်ချစ်ပိုင်(AMIA) on Monday, April 22,2019
လက်ရှိတွင် တရုတ်နိုင်ငံ အပါအ၀င် အာဖရိကနိုင်ငံများမှလည်း မြန်မာ့ဆန်ဝယ်ယူမှုကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည်။ ဓာတ်ပုံ- ကေဇူး(AMIA)
နှစ်သစ်ကူးနှင့် အတူ မြန်မာ့ဆန်လောက တစ်ခုလုံးကို တုန်လှုပ်သွားစေနိုင်သည့် သတင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာ သည်။ ယင်းသတင်းမှာ မြန်မာ့ဆန်တွေဟာ စားသုံးရန် မသင့်သည့်အတွက် အာဖရိကတိုက်က အိုင်ဗရီကို့စ်မှာ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသည်ဆိုတဲ့ သတင်းဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ စားသုံးနေသည့်ဆန်များ၏ အရည်အသွေးကိုလည်း စိုးရိမ်တကြီး မေးခွန်းထုတ်မူများ ရှိလာသည်။ သို့သော် အဆိုပါသတင်းက ပြည်တွင်း ဆန်ဈေးကွက်ကို လတ်တလောမှာ ရိုက်ခတ်မူ မရှိနိုင်သေးကြောင်း ကုန် သည်များက ဆိုသည်။
" အခု လက်ရှိမှာတော့ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်တွေ ခံနေတာရယ်၊ အရင် အရောင်းအဝယ် လက်စတွေ ရှိနေတာရယ် ကြောင့် ပြည်တွင်း ဆန်ဈေးကွက်က ငြိမ်နေပါတယ်။ ဒီသတင်း ထွက်ပေါ်လာပြီး ယခုလက်ရှိမှာတော့ ပြည် တွင်း ဈေးကွက်က ဆန်ဈေးဟာ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်က ဈေးနဲ့ယှဉ်ရင် အပြောင်းအလဲ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒီသ တင်းရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကိုတော့ လတ်တလောမှာ တွေ့ရှိရဖွယ် မရှိသေးပါဘူး။ နောက်ထပ် တစ်လလောက်မှာ ဒီ သတင်းရဲ့ သက်ရောက်မှုက သိသာလာရင် သိသာလာမယ်။ လက်ရှိ ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်တွေကတော့ ရောင်းရ ဦးမှာပဲ ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်က ဆိုသည်။
သို့သော် အဆိုပါသတင်းက မြန်မာ့ဆန်၏ ပုံရိပ်ကို အနည်းနှင့်အများ ထိခိုက်နိုင်သော်လည်း စီးပွားရေးနှင့် ကူး သန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်တို့၏ ဖြေရှင်းပုံအပေါ် မူတည်ကြောင်း ၎င်း က မှတ်ချက်ပြုသည်။
" မြန်မာ့ဆန်ရဲ့ ပုံရိပ်ကတော့ ထိခိုက်တာပေါ့၊ ကိုယ်ဘက်က ဖြေရှင်းချက် မှန်ကန်ရင်တော့ အရောင်းအဝယ် ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်က အပြစ်ဆိုရင်တော့ အရောင်းအဝယ်မှာ ထိခိုက်နိုင်တယ် " ဟု ဆို သည်။
အာဖရိက ဈေးကွက်သည် ယှဉ်ပြိုင်မှု အလွန်ပြင်းထန်ပြီး ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယတို့မှ ဆန်တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ များနှင့် မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ် စသောနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းသူများအကြား ပြင်းထန်စွာ ယှဉ်ပြိုင်လေ့ရှိကြောင်း သိ ရသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ဆန်ဈေးက တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆန်နဲ့ ယှဉ်ရောင်းရင် ဈေးလျှော့ရောင်းရတယ်။ ဗီယက် နမ်တို့၊ ထိုင်းတို့ရဲ့ ဆန်နဲ့ တော်တော်ကွာတယ်။ အရည်အသွေးကွာတယ်။ မယုံကြည်မှုလည်း ပါတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဆန်တွေက သူများနိုင်ငံက ဆန်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် တန်းတူမရဘူး။ တကယ်လို့ ဒါဟာ ကိုယ့်ဘက်က အမှားဆိုရင် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တော်တော် မျက်နှာပျက်ရမယ်၊ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ရောင်းတဲ့ ဈေးကွက်မှာ ယုံကြည်မှုမရှိတော့ရင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု ဦးစိုင်းကျော်က ပြောဆိုထားသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအဖွဲ့ချုပ် (MRF)၊ ဆန်တင်ပို့သူများ၊ Inspection Agency များနှင့် သက်ဆိုင်သူများပါဝင်သည့် အစည်းအဝေးတစ်ခုကို မကြာမီ ပြုလုပ်သွားရန် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။
“ ဖြစ်ရပ်အမှန်ကို ဆန်းစစ်မယ်၊ ဘယ်သူရဲ့ အားနည်း ချက်လဲ၊ သက်ဆိုင်ရာ တင်ပို့တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေလား၊ ပွဲစား လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီလား၊ inspection agency တွေလား၊ စီးပွားကူးသန်း အနေနဲ့က ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ ဒီဖြစ် ရပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်တင်ပို့သူများအတွက် Wake-up Call (အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံ) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်တင်ပို့မှု တစ်ခုလုံးကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရမဲယ့် အချိန်ကျ လို့နေပေပြီ” ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ထူးက ဆိုသည်၊၊
၎င်းက ဆန်တင်သည့်အချိန် သင်္ဘောပေါ်တွင် အစိုဓာတ်ရှိနေခြင်း၊ ဆန်များဟာ သင်္ဘောဝမ်းဗိုက်ထဲတွင် ၈ လခန့် အချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ရခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကောက်ချက်ချသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး အသင်းချုပ်ကလည်း ကာလရှည် သိုလှောင်မှုကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟု အလားတူ ကောက် ချက်မျိုး ချခဲ့သည်။
ယခုကိစ္စတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အာဖရိကနိုင်ငံ (၄) နိုင်ငံအထိ ကုန်မချနိုင်ဘဲ လှည့်ပတ်နေရသည့်အတွက် ကြာမြင့်စွာ သိုလှောင်မှု long Storage ပြဿနာပင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဆန်ဝယ်သည့် Buyer များ အနေဖြင့် အဆိုပါ ကိစ္စတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆနိုင်ကြောင်း၊ ဆန်ဝယ်သူ (buyer) ဟု ဆိုရာတွင် အဓိက ဝယ်ယူစားသုံးသူ (End buyer consumer) များ မဟုတ်ဘဲ ကြားခံကုန်သည် (Trader) များသာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမင်းအောင်က ဆိုသည်။
ကြားခံကုန်သည် (trader) များကို ရောင်းချမှုကြောင့် ယခုလို ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်ရသဖြင့် end buyer များ အထိ ချိတ်ဆက်ရောင်းချနိုင်သည့် အစီအစဉ်များနှင့် G to G ရောင်းချမှု အစီအစဉ်များ စီစဉ်ရန် လိုအပ်သည် ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီတွေ၊ ဆန်စက်ပိုင်တွေ အနေနှင့် ဆန်၏ အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ဖို့ လိုအပ်သည်ဟု အသင်းချုပ်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ဦးအောင်ထူး က " တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆန်တင်ပို့မှု အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီဂုဏ်ပုဒ်ကို တစ်ခြား နိုင်ငံတွေကို ပေးခဲ့ရပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းကမှ ကမ္ဘာမှာ ပဉ္စမမြောက် ဆန်တင်ပို့မှု အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာ ခဲ့တာပါ။ ဒီလို နေရာရလာပေမယ့် ပြိုင်ရတဲ့ ပြိုင်ကွင်းက အပြိုင်အဆိုင် များတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကပဲ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ဆန်လုံးရှည်တွေကို ဥရောပက အခွန်ပြန် ကောက်တာကို ကြုံခဲ့ရတယ်။ အခုကျတော့ ဒီလိုမျိုး စား သုံးရန် မသင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံက ပို့တဲ့ ဆန်တွေ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်။ ဈေးကွက်ကို ဝင်စ နိုင်ငံတွေရဲ့ ကြုံတွေရတဲ့ ပြဿနာတွေအတိုင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်း ပြင်းထန်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုဟာ တရားသော ပြိုင်ဆိုင်မှုဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ inspection agency တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး မတရားသော ပြိုင်ဆိုင်မှု လုပ်ခဲ့မယ်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစိုဓာတ် မရောက်ပဲ တင်ပို့ခဲ့မယ်။ အလေးချိန် မပြည့်ပဲ တင်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုပြဿနာမျိုး တွေ့နိုင်ပါတယ် ” ဟု ဆိုသည်။
စိုက်ပျိုး တောင်သူများမှ အစ ပြည်ပပို့သည့် ကုမ္ပဏီများ၊ တစ်ဆင့်ခံ ရောင်းဝယ်သူတွေ အလယ် ကုန်သည်၊ စက်မှုအသင်းချုပ်၊ ဝန်ကြီးဌာနများအဆုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် ဒုဝန်ကြီးက တိုက်တွန်းထားသည်။
ဆန်စပါးအသင်းချုပ် အနေဖြင့်လည်း ပြည်ပကို တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများ၊ ကုန်ပစ္စည်းကို သင်္ဘောပေါ် မတင်ခင် စစ်ဆေးရသည့် Third Party Inspection Agency (အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေး ကြားခံအဖွဲ့အစည်း)များ အ နေဖြင့် အရည်အသွေးပိုင်းကို ထိရောက်တိကျစွာ စီမံဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုဖြစ်စဉ်သည် မြန်မာ့ဆန် ပြည်ပတင်ပို့မှု ဈေးကွက်အတွက် ကြီးမားစွာ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် အာဖရိက ဈေးကွက်အပေါ် အားကိုးနေရသည့် ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ဆန်တင်ပို့မှုအပေါ် ကြီး မားသည့် သက်ရောက်မှုများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း ဆန်လုပ်ငန်းရှင် အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
လက်ရှိ ၂၅ မတ် ဆန်အမျိုးအစားကို ဥရောပ နိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံများက တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အာဖရိက ဈေးကွက်သို့ ဦးစားပေးတင်ပို့ရန် ရည်ရွယ်ထားခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအခြေအနေ သည် ၂၅ မတ် ဆန်ဈေးကွက်အတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာကြောင်း သိရသည်။
" တရုတ်ကလည်း မဝယ်ပါဘူး၊ ဥရောပဘက်ကလည်း ဆန် အကန့်အသတ် နဲ့ဝယ်နေတော့ မနှစ်ကထက် စာရင် အရောင်းအဝယ် အေးတယ်။ အာဖရိက တစ်ခုကို အဓိက ပြန်အားထားရမှာကို၊ ဒီဈေးကွက်ပါ ထပ်ပျက် တယ် ဆိုရင်တော့ ဆန်လောကအတွက် မကောင်းပါဘူး " ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး ကုန်သည်များ အသင်းအ တွင်းရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်က ဆိုသည်။
သို့သော် ယခု ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့က ကုန်ဖလှယ်မှုစနစ် (Barter System) ဖြင့် ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်ရန် ယူနန် ပြည်နယ် ကူမင်းပြည်သူ့ အစိုးရနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ နှစ်နှိင်ငံ သဘောတူညီမှု လက်မှတ် M၀U လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ သိရသည်။
အဆိုပါ MoU ကို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများမှ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို တာဝန်ပေးထားကာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ UMFCCI ၏ လယ်ယာ/မွေး/ရေ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကို တာဝန်ပေးအပ်ထားကြောင်း အသင်းချူပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမင်း အောင်က ၎င်း၏ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းကော်မတီနှင့် အသင်းအဖွဲ့များ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငဘက်မှ တင်ပို့မည့် ပစ္စည်းများ၊ တင် သွင်းလိုသည့် ပစ္စည်းများကို စာရင်းပြုစုရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက် တရုတ်ကုမ္ပဏီများ ဘက်မှလည်း တင်ပို့လိုသည့် ပစ္စည်းများ၊ တင်သွင်းလိုသည့် ပစ္စည်းများကို ပြုစုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ MoU ကို အောင်မြင်စွာ ညှိနှိုင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါက ဆန်စပါး အပါအဝင် မြန်မာ့လယ်ယာ သားငါး ထွက်ကုန်များကို မူဆယ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းမှ တွင်ကျယ်စွာ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည် ဖြစ် ပြီး ကုန်ဖလှယ်မှုဖြစ်၍ လယ်ယာထွက်ကုန်များ တင်ပို့သည့် တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသော ယူနန်ပြည်နယ်မှ ထုတ်လုပ်သသည့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများနှင့်၊ ဓာတ်မြေသြဇာ စသောကုန်ပ စ္စည်းများကို ပြန်လည်ဝယ်ယူပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ တစ်ရက်နေ့ကနေ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ပြည်ပကို ဆန်နှင့် ဆန်ကွဲ တန်ချိန် ၂ဒသမ၁ သန်းကျော် တင်ပို့ထားပြီး ယင်းအထဲမှ ၁ သန်းကျော်ကို ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ တင် ပို့ခဲ့ပြီး ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ တင်ပို့သည့် ဆန်စုစုပေါင်း၏ တစ်ဝက်ကို အာဖရိက နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် အာဖရိက နိုင်ငံများသို့ ဆန်တင်ပို့ရာတွင် ၂၅ မှတ်ဆန်နှင့် ၁၅ မှတ် ဆန်များကို အဓိက တင်ပို့နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန္ကုန်၊ ဧပြီ ၂၁
နွစ်သစ္ကူးနွင့် အတျူမန္မာ့ဆန်လောက တစ္ခုလုံးကို တုန္လှုပ်သြားစေနိုင်သည့် သတင်းတစ္ချုဖစ်ပေါ်လာ သည်။ ယင်းသတင်းမျွာမန္မာ့ဆန်တြေဟာ စားသုံးရန် မသင့်သည့်အတြက် အာဖရိကတိုက္က အိုင္ဗရီကို့စ္မွာ ဖ်က္ဆီးခံလိုက်ရသည္ဆိုတဲ့ သတင်ျးဖစ်သည်။ ယင်းနွင့် ပက်သက်ပြီျးပည္တငြ်းမွာ စားသုံးနေသည့္ဆန္မ်ား၏ အရည်အေသြးကိုလည်း စိုးရိမ္တကြီး မေးခြန်းထုတ္မူမ်ား ရွိလာသည်။ သို့သော် အဆိုပါသတင်းကျပည္တငြ်း ဆန်စေ်းကြက္ကို လတ္တေလာမွာ ရိုက္ခတ္မူ မရွိနိုင်သေးကြောင်း ကုန် သည္မ်ားက ဆိုသည်။
" အခု လက်ရွိမွာတော့ သင်္ကြန္ပိတ်ရက်တြေ ခံနေတာရယ်၊ အရင် အေရာင်းအဝယ် လက္စေတြ ရွိနေတာရယ် ကြောင့်ျပည္တငြ်း ဆန်စေ်းကြက္က ငြိမ်နေပါတယ်။ ဒီသတင်း ထြက်ပေါ်လာပြီး ယခုလက်ရွိမွာတေျာ့ပည် တြင်း စေ်းကြက္က ဆန်စေ်းဟာ သင်္ကြန္မတိုင္ခင္က စေ်းနဲ့ယွဉ်ရင် အျေပာင်းအလဲ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဒီသ တင်းရဲ့ ရိုက္ခတ္မှုကိုတော့ လတ္တေလာမွာ တြေ့ရွိရဖြယ် မရွိသေးပါဘူး။ နောက္ထပ် တစ္လေလာက္မွာ ဒီ သတင်းရဲ့ သက်ရောက္မှုက သိသာလာရင် သိသာလာမယ်။ လက်ရွိ ခ်ုပ္ထားတဲ့ စာခ်ုပ်တြေကေတာ့ ရောင်းရ ဦးမွာပဲ ” ဟျုမန္မာနိုင်ငံ ဆန္စပါးကုန်သည္မ်ားအသင်း အတြင်းရေးမွူး ဦးအောင်ျမင့္က ဆိုသည်။
သို့သော် အဆိုပါသတင်းကျမန္မာ့ဆန်၏ ပုံရိပ္ကို အနည်းနွင့်အမ်ား ထိခိုက္နိုင်သ္လောည်း စီးပြားရေးနွင့် ကူး သန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ျမန္မာနိုင်ငံ ဆန္စပါးအသင်းခ်ုပ္တို့၏ျေဖရွင်းပုံအေပါ် မူတည်ကြောင်း ၎င်း က မွတ္ခ်က်ျပုသည်။
"ျမန္မာ့ဆန်ရဲ့ ပုံရိပ္ကေတာ့ ထိခိုက္တာပေါ့၊ ကိုယ္ဘက္ကျေဖရွင်းခ်က် မွန္ကန်ရင်တော့ အေရာင်းအဝယ် ပုံမွန်ျပန်ျဖစ်သြားနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့္ဘက္က အျပစ္ဆိုရင်တော့ အေရာင်းအဝယ္မွာ ထိခိုက္နိုင္တယ် " ဟု ဆို သည်။
အာဖရိက စေ်းကြက်သည် ယွဉ်ပြိုင္မှု အလြန်ျပင်းထန်ပြီး ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယတို့မွ ဆန္တင်သြင်းသည့် ကုမ္ပဏီ မ်ားနွင့်ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ် စေသာနိုင်ငံမ်ားမွ တင်သြင်းသူမ်ားအကြာျးပင်းထန္စြာ ယွဉ်ပြိုင်လေ့ရွိကြောင်း သိ ရသည်။
“ ကျြန်တ္တောို့ နိုင်ငံက ဆန်စေ်းက တျခားနိုင်ငံတြေရဲ့ ဆန္နဲ့ ယွဉ်ရောင်းရင် စေ်းလွေ်ာ့ရောင်းရတယ်။ ဗီယက် နမ္တို့၊ ထိုင်းတို့ရဲ့ ဆန္နဲ့ တော်တ္ကေြာာတယ်။ အရည်အေသြးကြာတယ်။ မယုံကြည္မှုလည်း ပါတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျြန်တ္တောို့ ဆန်တြေက သူမ်ားနိုင်ငံက ဆန်တြေနဲ့ ယွဉ်ရင် တန်းတူမရဘူး။ တကယ္လို့ ဒါဟာ ကိုယ့္ဘက္က အမွားဆိုရင် ကမ္ဘာ့အလယ္မွာ တော်တော် မ်က္နွာပ်က်ရမယ်၊ တစ္နိုင်ငံနဲ့ တစ္နိုင်ငံ ရောင်းတဲ့ စေ်းကြက္မွာ ယုံကြည္မှုမရွိတော့ရင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါျးဖစ္နိုင္တယ်” ဟု ဦးစိုင်းကေ်္ကာျေပာဆိုထားသည်။
ယင်းနွင့် ပတ်သက်ပြီျးမန္မာနိုင်ငံ ဆန္စပါးအဖြဲ့ခ်ုပ် (MRF)၊ ဆန္တင္ပို့သူမ်ား၊ Inspection Agency မ်ားနွင့် သက္ဆိုင်သူမ်ားပါဝင်သည့် အစည်းအေဝးတစ္ခုကို မကြာမျီပုလုပ်သြားရန် စီးပြားရေးနွင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမျွပင္ဆင်နေကြာင်း သိရသည်။
“ျဖစ်ရပ်အမွန္ကို ဆန်းစစ္မယ်၊ ဘယ်သူရဲ့ အားနည်း ခ်က္လဲ၊ သက္ဆိုင်ရာ တင္ပို့တဲ့ ကုမ္ပဏီတြေလား၊ ပြဲစား လုပ္တဲ့ ကုမ္ပဏီလား၊ inspection agency တြေလား၊ စီးပြားကူးသန်း အေနနဲ့က ဘာလုပ်ပေးနိုင္မလဲ။ ဒျီဖစ် ရပ်ဟျာမန္မာနိုင်ငံ ဆန္တင္ပို့သူမ်ားအတြက် Wake-up Call (အခ်က်ပေးခေါင်းလောင်းသံ) ပျဲဖစ္ပါတယ်။ ဆန္တင္ပို့မှု တစ္ခုလုံးကျိုပန္လည် ဆန်းစစ်ရမဲယ့် အခ်ိန္က် လို့နေပပြီ” ဟု စီးပြားရေးနွင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင္ထူးက ဆိုသည်၊၊
၎င်းက ဆန္တင်သည့်အခ်ိန် သေင်္ဘာပေါ်တြင် အစိုဓာတ်ရွိနျေခင်း၊ ဆန္မ်ားဟာ သေင်္ဘာဝမ်းဗိုက္ထဲတြင် ၈ လခန့် အခ်ိန်ကျြာမင့်ခဲ့ရျခင်းတို့ကြောင့်ျဖစ္နိုင်ကြောင်း ကောက္ခ်က္ခ်သည်။ျမန္မာနိုင်ငံ ဆန္စပါး အသင်းခ်ုပ္ကလည်း ကာလရွည် သိုလွောင္မှုကြောင့်ျဖစ်ရသည်ဟု အလားတူ ကောက် ခ်က္မ်ိုး ခ်ခဲ့သည်။
ယခုကိစ္စတြင် ယေဘုယ်အာျးဖင့် အာဖရိကနိုင်ငံ (၄) နိုင်ငံအထိ ကုန္မခ်နိုင္ဘဲ လွည့်ပတ်နေရသည့်အတြက် ကျြာမင့်စြာ သိုလွောင္မှု long Storageျပဿနာပင်ျဖစ္နိုင်ကြောင်း၊ ဆန်ဝယ်သည့် Buyer မ်ား အေနျဖင့် အဆိုပါ ကိစ္စတြင် အဓိက တာဝန်ရွိသည်ဟု ယေဘုယ်အာျးဖင့် ယူဆနိုင်ကြောင်း၊ ဆန်ဝယ်သူ (buyer) ဟု ဆိုရာတြင် အဓိက ဝယ်ယူစားသုံးသူ (End buyer consumer) မ်ား မဟုတ္ဘဲ ကြားခံကုန်သည် (Trader) မ်ားသျာဖစ်ကြောင်ျးမန္မာနိုင်ငံ ဆန္စပါးအသင်းခ်ုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမင်းအောင္က ဆိုသည်။
ကြားခံကုန်သည် (trader) မ်ားကို ရောင်းခ်မှုကြောင့် ယခုလျိုပဿနာမ်ား ပေါ်ပေါက်ရသျဖင့် end buyer မ်ား အထိ ခ်ိတ္ဆက်ရောင်းခ်နိုင်သည့် အစီအစဉ္မ်ားနွင့် G to G ရောင်းခ်မှု အစီအစဉ္မ်ား စီစဉ်ရန် လိုအပ်သည် ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
တင္ပို့သည့် ကုမ္ပဏီတြေ၊ ဆန္စက္ပိုင်တြေ အေနနွင့် ဆန်၏ အရည်အေသြးပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရက္မြှုကို ပိုမို ဦးစားပေးလုပ္ကိုင္ဖို့ လိုအပ်သည်ဟု အသင်းခ်ုပ္က မွတ္ခ်က်ျပုခဲ့သည်။
ဦးအောင္ထူး က " တစ္ခ်ိန္ကျမန္မာနိုင်ငံဟာ ဆန္တင္ပို့မှု အမ်ားဆုံး နိုင်ငျံဖစ္ခဲ့ပေမယ့် ဒီဂုဏ္ပုဒ္ကို တစ်ျခား နိုင်ငံတြေကို ပေးခဲ့ရပြီး လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ပိုင်းကမွ ကမ္ဘာမွာ ပဉ္စမျေမာက် ဆန္တင္ပို့မှု အမ်ားဆုံးနိုင်ငျံဖစ္လာ ခဲ့တာပါ။ ဒီလို နေရာရလာပေမယ့် ပြိုင်ရတဲ့ ပြိုင္ကြင်းက အပြိုင်အဆိုင် မ်ားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နွစ္ကပျဲမန္မာ နိုင်ငံရဲ့ ဆန္လုံးရွည်တြေကို ဥရောပက အခြန်ျပန် ကောက္တာကို ကြုံခဲ့ရတယ်။ အခုက်တော့ ဒီလိုမ်ိုး စား သုံးရန် မသင့္ဆိုတဲ့ အေကြာင်ျးပခ်က္နျဲ့မန္မာ နိုင်ငံက ပို့တဲ့ ဆန်တြေ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတယ်။ စေ်းကြက္ကို ဝင္စ နိုင်ငံတြေရဲ့ ကြုံတြေရတျဲ့ပဿနာတြေအတိုင်း ပြိုင္ဆိုင္မှုကလည်ျးပင်းထန္ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပြိုင္ဆိုင္မှုဟာ တရားသော ပြိုင္ဆိုင္မှုဘျဲဖစ်သင့်ပါတယ်။ inspection agency တြေနဲ့ ပေါင်းပြီး မတရားသော ပြိုင္ဆိုင္မှု လုပ္ခဲ့မယ်၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အစိုဓာတ် မေရာက္ပဲ တင္ပို့ခဲ့မယ်။ အေလးခ်ိန် မျပည့်ပဲ တင္ပို့ခဲ့မယ္ဆိုရင် ဒီလျိုပဿနာမ်ိုး တြေ့နိုင္ပါတယ် ” ဟု ဆိုသည်။
စိုက္ပ်ိုး တောင်သူမ်ားမွ အဈပည္ပပို့သည့် ကုမ္ပဏီမ်ား၊ တစ္ဆင့္ခံ ရောင်းဝယ်သူတြေ အလယ် ကုန်သည်၊ စက္မှုအသင်းခ်ုပ်၊ ဝန်ကြီးဌာနမ်ားအဆုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရက်ြသြားကြရန် ဒုဝန်ကြီးက တိုက္တြန်းထားသည်။
ဆန္စပါးအသင်းခ်ုပ် အေနျဖင့္လည်ျးပည္ပကို တင္ပို့သည့္ကုမ္ပဏီမ်ား၊ ကုန္ပစ္စည်းကို သေင်္ဘာပေါ် မတင္ခင် စစ်ဆေးရသည့် Third Party Inspection Agency (အရည်အေသြး စစ်ဆေးရေး ကြားခံအဖြဲ့အစည်း)မ်ား အ နျေဖင့် အရည်အေသြးပိုင်းကို ထိရောက္တိက်စြာ စီမံဆောင်ရက်ြရန် နည်းလမ်းမ်ား ရွာဖြေသြားမည်ဟု ဆို သည်။
ယချုဖစ္စဉ်သည်ျမန္မာ့ဆန်ျပည္ပတင္ပို့မှု စေ်းကြက်အတြက် ကြီးမားစြာ သက်ရောက္မှု ရွိနိုင္မည်ျဖစ်သည်။ အဓိကအာျးဖင့် အာဖရိက ဈေးကြက်အေပါ် အားကိုးနေရသည့် ပင္လယ်ရေကြာင်းမွ ဆန္တင္ပို့မှုအေပါ် ကြီး မားသည့် သက်ရောက္မှုမ်ား ရွိလာနိုင်ကြောင်း ဆန္လုပ်ငန်းရွင် အသိုင်းအဝိုင်းမွ သိရသည်။
လက်ရွိ ၂၅ မတ် ဆန်အမ်ိုးအစားကို ဥရောပ နိုင်ငံမ်ားနွင့် တရုတ္နိုင်ငံမ်ားက တင်သြင်းခြင့် ပိတ္ပင္ထားခဲ့ပြီး နောက္ပိုင်းတြင် အာဖရိက ဈေးကြက်သို့ ဦးစားပေးတင္ပို့ရန် ရည်ရယ္ထြားခဲ့သ္လောည်း လက်ရွိအျေခအေန သည် ၂၅ မတ် ဆန်ဈေးကြက်အတြက် စိုးရိမ္စရျာဖစ္လာကြောင်း သိရသည်။
" တရုတ္ကလည်း မဝယ္ပါဘူး၊ ဥရောပဘက္ကလည်း ဆန် အကန့်အသတ် နဲ့ဝယ်နေတာ့ မနွစ္ကထက် စာရင် အေရာင်းအဝယ် အေးတယ်။ အာဖရိက တစ္ခုကို အဓိကျပန်အားထားရမွာကို၊ ဒီစေ်းကြက္ပါ ထပ္ပ်က် တယ် ဆိုရင်တော့ ဆန်လောကအတြက် မေကာင်းပါဘူး " ဟျုမန္မာနိုင်ငံ ဆန္စပါး ကုန်သည္မ်ား အသင်းအ တြင်းရေးမွူး ဦးအောင်ျမင့္က ဆိုသည်။
သို့သော် ယခု ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့က ကုန္ဖလွယ္မှုစနစ် (Barter System)ျဖင့် ကုန်သြယ္မျှုပုလုပ်ရန် ယူနန်ျပည္နယ် ကူမင်ျးပည်သူ့ အစိုးရနွင့် ကုန်သြယ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ နွစ္နွိင်ငံ သေဘာတူညီမှု လက္မွတ် M၀U လက္မွတ်ရေးထိုးနိုင္ခဲ့ကြောင်ျးမန္မာနိုင်ငံ ဆန္စပါးအသင်းခ်ုပ္မွ သိရသည်။
အဆိုပါ MoU ကို နွစ္နိုင်ငံ အစိုးရတာဝန်ရွိသူမ်ားမွ လက္မွတ်ရေးထိုး ခဲ့ကျြခင်ျးဖစ်ပြီး အေကာင်အထည် ဖော်ရန်အတြက် တရုတ္နိုင်ငံဘက္မွ ကုမ္ပဏီ တစ္ခုကို တာဝန်ပေးထားကျာမန္မာနိုင်ငံဘက္မွ UMFCCI ၏ လယ်ယာ/မြေး/ရေ ဖြံ့ဖြိုးရေးက္မောတီကို တာဝန်ပေးအပ္ထားကြောင်း အသင်းခ်ူပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမင်း အောင္က ၎င်း၏ ဖေ့ဘြတ္စာမ်က္နွာတြင် ဖော်ျပထားသည်။
ယင်းက္မောတီနွင့် အသင်းအဖြဲ့မ်ား ဆက္လက်ညှိနှိုင်းပြီျးမန္မာနိုင်ငဘက္မွ တင္ပို့မည့် ပစ္စည်းမ်ား၊ တင် သြင်းလိုသည့် ပစ္စည်းမ်ားကို စာရင်ျးပုစုရမည်ျဖစ်ပြီး တစ္ဖက် တရုတ္ကုမ္ပဏီမ်ား ဘက္မွလည်း တင္ပို့လိုသည့် ပစ္စည်းမ်ား၊ တင်သြင်းလိုသည့် ပစ္စည်းမ်ားကျိုပုစုသြားမည်ျဖစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ MoU ကို အောင်ျမင္စြာ ညှိနှိုင်း အေကာင်အထည် ဖ္နောိုင္ပါက ဆန္စပါး အပါအဝင်ျမန္မာ့လယ်ယာ သားငါး ထြက္ကုန္မ်ားကို မူဆယ္နယ္စပ် ကုန်သြယ္မှုလမ်းကြောင်းမွ တြင္က်ယ္စြာ တင္ပို့ရောင်းခ်နိုင္မည်ျဖစ် ပြီး ကုန္ဖလွယ္မျှုဖစ်၍ လယ်ယာထြက္ကုန္မ်ား တင္ပို့သည့် တန္ဖိုးနွင့် ညီမ်ွသော ယူနန်ျပည္နယ္မွ ထုတ္လုပ်သသည့် ဆောက္လုပ်ရေးပစ္စည်းမ်ား၊ လယ်ယာသုံး စက္ပစ္စည်းမ်ားနွင့်၊ ဓာတ်ျေမသြဇာ စေသာကုန္ပ စ္စည်းမ်ားကျိုပန္လည်ဝယ်ယူပေးရမည်ျဖစ်ကြောင်း သိရသည်။
ျမန္မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၈ ခုနွစ်၊ ဧပြီလ တစ်ရက်နေ့ကေန ၂၀၁၉ ခုနွစ် ဖေဖ်ာဝါရီလအထျိပည္ပကို ဆန္နွင့် ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန် ၂ဒသမ၁ သန်းကေ်ာ် တင္ပို့ထားပြီး ယင်းအထဲမွ ၁ သန်းကေ်္ကာို ပင္လယ်ရေကြာင်းမွ တင် ပို့ခဲ့ပြီး ပင္လယ်ရေကြာင်းမွ တင္ပို့သည့် ဆန္စုစုပေါင်း၏ တစ်ဝက္ကို အာဖရိက နိုင်ငံမ်ားသို့ တင္ပို့ထာျးခင်ျးဖစ်သည်။
ျမန္မာနိုင်ငံ အေနျဖင့် အာဖရိက နိုင်ငံမ်ားသို့ ဆန္တင္ပို့ရာတြင် ၂၅ မွတ္ဆန္နွင့် ၁၅ မွတ် ဆန္မ်ားကို အဓိက တင္ပို့နျေခင်ျးဖစ်သည်။
I precisely needed to appreciate you again. I am not sure what I might have undertaken in the absence of the entire ideas contributed by you concerning my field. This was an absolute troublesome matter in my position, nevertheless encounteringanew expert way you processed that took me to jump for happiness. Extremely thankful for this assistance and as well , sincerely hope you are aware ofagreat job you are accomplishing educating other individuals through the use of your websites. I am sure you have never come across all of us. nike air max
by nike air max at June 10 2019
I would like to get across my passion for your kind-heartedness giving support to women who actually need guidance on the area. Your personal dedication to getting the solution all-around appears to be incredibly effective and has in every case empowered ladies much like me to realize their goals. The insightful guidelines denotesawhole lot to me and extremely more to my colleagues. Regards; from all of us. coach factory outlet [url=http://www.coachoutletsfactory.com]coach factory outlet[/url]
by coach factory outlet at June 08 2019
Thanksalot for providing individuals with an extraordinarily brilliant possiblity to read from this website. It's always very great plus packed withalot of fun for me and my office peers to visit your site not less than three times every week to see the fresh secrets you have got. And lastly, I am also at all times amazed considering the terrific creative concepts served by you. Some 1 points on this page are absolutely the simplest we have ever had. jordan shoes
by jordan shoes at June 06 2019
Thanksalot for providing individuals withavery nice possiblity to read articles and blog posts from this website. It's usually very cool and also stuffed withagood time for me personally and my office mates to visit your website no less than thrice inaweek to read through the fresh stuff you have. Of course, I'm at all times happy for the remarkable ideas served by you. Some4areas in this article are definitely the simplest I've had. birkin bag
by birkin bag at June 04 2019
Thanksalot for giving everyone remarkably breathtaking possiblity to check tips from this site. It really is very great and also stuffed with fun for me and my office colleagues to visit your web site at minimum3times weekly to learn the newest tips you have. And of course, I'm so certainly fulfilled with all the powerful tips you give. Selected two facts in this post are absolutely the simplest I have had. balenciaga sneakers
by balenciaga sneakers at June 03 2019
My husband and i ended up being thrilled when Albert managed to carry out his investigations with the ideas he received using your web page. It's not at all simplistic to just possibly be releasing methods which often men and women might have been making money from. We grasp we need the writer to be grateful to for that. All of the explanations you've made, the straightforward web site navigation, the relationships you will make it possible to engender - it is mostly remarkable, and it is letting our son in addition to the family reason why the idea is cool, and that is truly essential. Thank you for everything! yeezy 500
by yeezy 500 at May 31 2019
Thank youalot for providing individuals with an extremely terrific opportunity to read critical reviews from here. It is often so awesome and also full ofalot of fun for me and my office mates to search your site more than thrice inaweek to see the latest stuff you have got. Of course, we're actually happy with your fantastic methods served by you. Some4tips in this posting are unquestionably the best I've had. yeezy boost
by yeezy boost at May 30 2019
Needed to write you one bit of remark in order to give thanks as before for those pleasant basics you have featured here. It is certainly wonderfully generous of people like you to offer without restraint exactly whatanumber of people might have offered for anebook to end up making some dough for their own end, primarily seeing that you might well have tried it if you considered necessary. Those advice additionally acted to beagood way to fully grasp other people online have similar fervor really like my own to knowawhole lot more related to this condition. I'm sure there are several more pleasurable situations up front for individuals who browse through your website. coach factory outlet
by coach factory outlet at May 27 2019
I precisely wanted to thank you so much yet again. I am not sure the things I would have achieved in the absence of those information shown by you regarding suchatheme. It had beenareal traumatic scenario in my position, however , being able to view the very well-written mode you treated the issue made me to weep with gladness. I'm just happy for this assistance and pray you find out whatagreat job you are always carrying out instructing the rest through the use of your blog. Probably you have never come across all of us. adidas ultra boost
by adidas ultra boost at May 26 2019
I needed to send you the bit of remark just to say thank you again for all the stunning ideas you've provided in this article. It is so pretty open-handed with you to make extensively what numerous people would've made available as anebook to help make some bucks for their own end, chiefly now that you might well have done it if you desired. Those suggestions likewise served likeagreat way to know that other people have the same passion just as my own to learn lots more around this problem. Certainly there are some more fun times up front for individuals who find out your blog. kd shoes
by heqrjywzh@gmail.com at May 23 2019